I-Anthropocene, ingabe umuntu "ufanelwe" inkathi yakhe yokwakheka komhlaba? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UDavid melguizo | | Ukwahlukanisa, Izimo zezulu
Umthelela omncane kusuka esikhaleni
Sekuyiminyaka eminingana kuphikiswana ngokuthi ngabe abantu babaluleke ngokwanele yini ngokwethu ukuthi bafanele iminyaka yethu yokwakheka komhlaba. Umthelela omkhulu isintu esibe nawo emhlabeni kanye nemvelo yaso okudala ukuqothulwa kanye ngisho nokuguqula imijikelezo yemvelo neyesimo sezulu kuyenza ifunde ukwengeza ucingo I-Anthropocene esikalini somhlaba jikelele.
Kusukela ngo-2009 iqembu lomhlaba wonke lososayensi belifundela ukwethula lo mqondo omusha nokuthi ungakutholaphi ukuqala kwalesi sikhathi. Njengamanje umbiko usalungiswa futhi uzokwethulwa ku I-International Union yeGeological Sciences ngo-2016. Lo mzimba uwukuphela komzimba onekhono ophethe ukunquma ngeminyaka yoMhlaba.
Kuze kube yilapho kunqunywa ukuthi sizokwethula yini lokhu kuguqulwa, sizoqhubeka nokuhlala eHolocene, inkathi eyaqala cishe eminyakeni eyi-12000 edlule ngemuva kwenkathi yokugcina ye- izinguzunga zeqhwa. Isimo sezulu esipholile salesi sikhathi se-inter-glaciation yisona esivumele isintu ukuthi sithuthuke ngokushesha njengoba senzile, futhi lokho kuthuthuka kanye nomthelela okukuwo emhlabeni esihlala kuwo yikho okwadala ukuthi siqale ukucabanga ekufakweni kwe- a inkathi entsha ehlobene ngqo nabantu.
Elinye lamaphuzu asemqoka futhi okuxoxwa ngalo kakhulu linquma ukuthi le nkathi entsha yokwakheka komhlaba yaqala nini. Amaphuzu amabili aphakanyisiwe kube yiwo ukuqala kwenkathi yenuzi maphakathi nekhulu lamashumi amabili ngokuqhunyiswa kwamabhomu eHioshima naseNagasaki futhi kamuva nangezingozi ezinjengeChernobyl noma isitshalo samandla saseFukushima esishiye izimpawu zemisebe kubantu nasezilwandle nasentabeni. Ngakolunye uhlangothi, i- ukuqala kwezinguquko emboninil ngekhulu leshumi nesikhombisa noma ngisho ukuvela kwezolimo cishe eminyakeni eyizi-10000 XNUMX edlule.
Izizathu ezinikezwe yimibono eyahlukene yokuthola ukuqala kwalesi sikhathi esisha sokuma komhlaba zihlobene nokubonakala kwayo ku irekhodi le-sedimentary. Ake sicabange ngesazi sokuma komhlaba eminyakeni eyi-10000 20000-XNUMX, kufanele athole izici ezithile zokuhlukanisa ochungechungeni oluhambisana nesikhathi ukuze asibone njengesikhathi sokwakheka kwakhe.
Ukunaka lezi zakhiwo, okuhlobanisa ukuqala kwalesi sikhathi nokuvela kwezolimo kungenxa yokuthi kulapho umuntu aqala khona ukuvumelanisa umhlaba naye hhayi ukuwuguqula umhlaba. Ukuhamba kwezinsalela ezenziwe umuntu kusukela kulo mzuzu kunganqoba lokho okubangelwa yinoma yiluphi uhlobo lwesimo semvelo, kulungiswa inhlabathi yokulinywa, kusetshenziswa izinkwali, futhi kamuva ukusetshenziswa kwezimboni nokwakhiwa kwezinto phansi.
Ngakolunye uhlangothi, ukubhekwa kwesiqalo senguquko yezimboni njengesiqalo salesi sikhathi esisha kuhlongozwe njengesiqalo salesi sikhathi se-geological, kuphikiswa ukuthi ukuqala kokusetshenziswa kwamafutha ezimbiwa (amalahle, uwoyela, njll.) Kanye nezinto amandla omlilo wabo kuthululelwe emkhathini bekungavela njengengxenye yesendlalelo sesici. Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa komhlaba okubanzi nokumba amatshe amakhulu nokumba izimayini nakho kungaba esinye isici okufanele usibheke.
Kunoma ikuphi, lezi ziphakamiso ezimbili zicishe zanqatshwa, ngoba yize umthelela odakeni ungaba banzi kakhulu, ubungeke uthinte ubuso bonke bomhlaba, noma kunjalo, kusezandleni ze-International Union of Geological Sciences ukunquma ukuthi ziyafaneleka noma cha. lezi zinsuku.
Okukhethwa kukho okungcono kakhulu, futhi okungenzeka kube yilowo onethuba elihle lokukhethwa, ngaso sonke isikhathi esimweni lapho ukwethulwa kwalesi sikhathi esisha emlandweni wokuma komhlaba kwamukelwa, lokho ukuqala kwenkathi yenuzi noma i-athomu. Kokubili ukuhlolwa kwenuzi nezingozi ezikhungweni zamandla enuzi kuye kwasho lokho izinhlayiya ezinemisebe yobuthi zikhona kuwo wonke umhlaba futhi zizogcinwa emhlabeni, emanzini nasemoyeni iminyaka eminingi, zenze ukunwetshwa kwalolu hlobo lwezinhlayiya kwanele ukubhekwa njengokunwetshwa komhlaba.
Umgqugquzeli wale mbono yokugcina, UJan Zalasiewicz, usosayensi wase-University of Leicester ugcizelela ukuthi ngaphezu komthelela wenuzi kunezinye izinto ezinjengomthelela womuntu nobuchwepheshe bakhe kanye nokuvela kwezinto ezifana nepulasitiki noma i-aluminium noma ukugxila kwe-CO2 emkhathini kanye ne-acidification izilwandle zisisiholela ekubeni sikhulume nge "Ukusheshisa Okukhulu" okungakufanelekela lokhu "kuhlonishwa."
Konke kusizakala ngomzimba ozophatha ngo-2016 ukuhlola wonke la maphuzu bese kunqunywa ukuthi ngabe umuntu ufanele yini inkathi yokwakheka komhlaba eyedwa nokuthi kuzoba yini ukuqala kwayo, noma uma kunalokho, njengoba becabanga enye ingxenye enkulu umphakathi wezesayensi "sifuna nje ukuzinika ukubaluleka okukhulu kunalokho esinakho ngempela."
Imininingwane engaphezulu: Ukufudumala okungenakulungiseka koMhlaba kuzokhuphula ulwandle ngaphezu kwemitha; Ngabe uMhlaba wonke wake waba neqhwa?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-Anthropocene, ingabe umuntu "ufanelwe" inkathi yakhe yokwakheka komhlaba?